Hadda noqo qoraa curinta qorista, la-talinta, tarjumaadaha waraaqaha
Qoondaynta qoraayaasha: qoraal gacmeedka, talobixinta, tarjumaadyo iyo inbadan.
In ka badan 120 qoraa ayaa nala shaqeeya. Waxaan caawinaynay ardayda in kabadan 17 sano.
Amarada cusub maalin kasta
Saacadaha shaqada ee rogrogmi kara
Lacag bixinta joogtada ah
Amarada cusub maalin kasta.
Lacag bixinta la sugay
In ka badan 600 anshax.
Saacadaha shaqada ee rogrogmi kara.
In ka badan 17 sano oo khibrad suuqa ah.
Waxaan u qori jiray joornaallo dhowr sano ah waxaanan la kulmay khibrado fiican oo keliya illaa iyo hadda. Bixinta degdegga ah. Waa wax lagu farxo.
Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa iibsadaha Hubner sida uu uga jawaabey su'aalahayga.
Mawduucyada la soo jeediyey way kala duwan yihiin runtiina had iyo jeer wax bay ii yihiin. Ku habboon
Sideen ku noqdaa qoraa?
Buuxi foomka qoraaga ka dibna sii wad hannaanka aqoonsiga.
U soo jeedi sicirro shaqooyinka, noqo qoraa kaydinta la raadinayo, oo kordhi qiimeyntaada.
Ku bixinta amarada waqtiga loogu talagalay iyo tayo sare leh ayaa shardi u ah iskaashiga guuleysta.
Si aad u noqotid qoraa waraaqaha sayniska, waa inaad ka gudubto habka diiwaangelinta oo fudud oo aad buuxiso foomka su'aalaha. Inta lagu jiro diiwaangelinta qoraaga-qoraaga ayaa caddeyn doona dhammaan su'aalaha lagama maarmaanka ah. Waxaan ubaahanahay dukumiintiyada soo socda inay nala shaqeeyaan:
1. Shaqo muunad adigu samaysay
2. Cadaynta shahaadadaada aqooneed ee ugu sareysa
3. Faahfaahinta xiriirkaaga hadda
Waqtiga howshu waa ugu badnaan laba maalmood oo shaqo. Ka dib markaad dhammeystirto nidaamka oo dhan, waxaa lagu siin doonaa marinka barkadda dalabka ee aan la shaacin.
1. Waxaad ka shaqeyn kartaa guriga halkii aad aadi lahayd xafiiska markasta. Waxaad markasta fulin kartaa amarrada gurigaaga ama meel kale.
2. Waxaad leedahay Suurtagalnimada inaad doorato shaqada iyadoo kuxiran aaggaaga khibrada iyo kartida u leh. Adiga ayaa go'aaminaya shaqada aad aqbasho.
3. Waxaad leedahay dwuxuu kuu dejinayaa qiimahaaga shaqada. Haddii aadan ku raacsanayn qiimaha uu dejiyey maareeyuhu, soo bandhig ikhtiyaarkaaga oo isku dubarido qiimaha maamulaha.
4. Amarada ayaa si joogto ah loo heli karaa. Anaga waxaa had iyo jeer lagu siiyaa shaqo iyadoo aan loo eegin xilli.
5. Nidaamka lacag bixinta ee ku habboon. Qorayaasha qoraalada iyo shaqooyinka waxay si joogto ah u helaan lacag bixin laba jeer bishii.
6. Waxaad leedahay dwuxuu fursad u siinayaa inuu ka shaqeeyo meelahaaga gaarka ah ee cilmi baarista. Liistadeena waxaa ku jira in ka badan 600 oo cilmiyadeed. Waxaad ka heli doontaa nooc kasta oo shaqo ah: laga bilaabo shaqada fasalka 7aad sida qorista qormooyinka illaa xallinta dhibaatooyinka ku jira makaanikada farsamada.
7. Waxaad helaysaa alacag macquul ah. Mid ka mid ah qiimayaasha ay shirkadda Papernerds u taagan tahay.
Ka shaqeynta qoraa madax-bannaan oo ka socda Papernerds waxay noqon kartaa isha dakhligaaga ugu muhiimsan ama waqti-dhiman wax-ku-ool ah waqtigaaga firaaqada. Sidoo kale waa fursad wanaagsan inaadan lumin kartidaada xirfadeed haddii aadan ka shaqeyneynin goobtaada. Hada noqo qoraa arday.
aqoonso luqaddaAfrikaansAlbaaniyaanAmxaarCarabiArmeniyaanAzerbaijanBasqueBengaaliBurmaBoosniyaanBulgaariyaSugbaanoJicewaShiinaha tradShiine ereyDheenishDeutschEnglishIsberentoIstooniyaanFilibiinFinnishFranzösischFrisiyaanGaliisJoorjiyaankaGreekGujaratiHaitiyaanHausaHawaiianCibraanigaHindiHmongIgboIndooniisiyaanIrishIcelandicTalyaaniJabbaanJavaneseYaydhKannadaKazakhCatalanKhmerKyrgyzKuuriyaanKoorsiyaanCroatianKurdiLaoLaatiinLatviaLituwaaniyaanLuxembourgishmalagasyMalayalamMaleysiyaan ahMaltaMaoriMaaratiMacedoniaMongoliyaanNepaleseNederlandNorwejiBaastoBeershiyaanBoolishBoortaqiisPunjabiRomaniyaanRussischSamoanScottish GaelicIswidhishSeerbiyasesootoShonaSindhiSinhalaIslofaakIslofiyaaniyaansomaliIsbaanishSawaaxiliSundaneseTajikTamilTeluguThaiCzechTurkiYukreeniyaanHungaryUrduUzbekigaFiyatnaamiisWelshBelarusiyaanXhosaYorubaZulu
AfrikaansAlbaaniyaanAmxaarCarabiArmeniyaanAzerbaijanBasqueBengaaliBurmaBoosniyaanBulgaariyaSugbaanoJicewaShiinaha tradShiine ereyDheenishDeutschEnglishIsberentoIstooniyaanFilibiinFinnishFranzösischFrisiyaanGaliisJoorjiyaankaGreekGujaratiHaitiyaanHausaHawaiianCibraanigaHindiHmongIgboIndooniisiyaanIrishIcelandicTalyaaniJabbaanJavaneseYaydhKannadaKazakhCatalanKhmerKyrgyzKuuriyaanKoorsiyaanCroatianKurdiLaoLaatiinLatviaLituwaaniyaanLuxembourgishmalagasyMalayalamMaleysiyaan ahMaltaMaoriMaaratiMacedoniaMongoliyaanNepaleseNederlandNorwejiBaastoBeershiyaanBoolishBoortaqiisPunjabiRomaniyaanRussischSamoanScottish GaelicIswidhishSeerbiyasesootoShonaSindhiSinhalaIslofaakIslofiyaaniyaansomaliIsbaanishSawaaxiliSundaneseTajikTamilTeluguThaiCzechTurkiYukreeniyaanHungaryUrduUzbekigaFiyatnaamiisWelshBelarusiyaanXhosaYorubaZulu
Shaqada dhawaaqa waxay ku egtahay 200 oo xaraf
Fursadaha : taariikhda : Jawaab-celinta : Nalasoo ku dhow
Qorayaasha soo socda ayaa la doonayaa
Kharashka 2500 € - 3500 €
Kharashka 1500 € - 2500 €
aqoonso luqaddaAfrikaansAlbaaniyaanCarabiArmeniyaanAzerbaijanBasqueBengaaliBoosniyaanBulgaariyaBurmaSugbaanoJicewaShiinees (ver)Shiinees (trad)DheenishDeutschEnglishIsberentoIstooniyaanFinnishFranzösischGaliisJoorjiyaankaGreekGujaratiHaitiyaanHausaCibraanigaHindiHmongIgboIndooniisiyaanIrishIcelandicTalyaaniJabbaanJavaneseYaydhKannadaKazakhCatalanKhmerKuuriyaanCroatianLaoLaatiinLatviaLituwaaniyaanMalabarmalagasyMaleysiyaan ahMaltaMaoriMarathicMacedoniaMongoliyaanNepaleseNederlandNorwejiBeershiyaanBoolishBoortaqiisPunjabiRomaniyaanRussischIswidhishSeerbiyasesootoSinhalaIslofaakIslofiyaaniyaansomaliIsbaanishSawaaxiliSundaneseTajikTagalogTamilTeluguThaiCzechTurkiYukreeniyaanHungaryUrduUzbekigaFiyatnaamiisWelshBelarusiyaanYorubaZulu
AfrikaansAlbaaniyaanCarabiArmeniyaanAzerbaijanBasqueBengaaliBoosniyaanBulgaariyaBurmaSugbaanoJicewaShiinees (ver)Shiinees (trad)DheenishDeutschEnglishIsberentoIstooniyaanFinnishFranzösischGaliisJoorjiyaankaGreekGujaratiHaitiyaanHausaCibraanigaHindiHmongIgboIndooniisiyaanIrishIcelandicTalyaaniJabbaanJavaneseYaydhKannadaKazakhCatalanKhmerKuuriyaanCroatianLaoLaatiinLatviaLituwaaniyaanMalabarmalagasyMaleysiyaan ahMaltaMaoriMarathicMacedoniaMongoliyaanNepaleseNederlandNorwejiBeershiyaanBoolishBoortaqiisPunjabiRomaniyaanRussischIswidhishSeerbiyasesootoSinhalaIslofaakIslofiyaaniyaansomaliIsbaanishSawaaxiliSundaneseTajikTagalogTamilTeluguThaiCzechTurkiYukreeniyaanHungaryUrduUzbekigaFiyatnaamiisWelshBelarusiyaanYorubaZulu
Adoo gujinaya "Dir" Waxaan ku siinayaa ogolaanshahayga ka shaqeynta xogteyda shaqsiyadeed si waafaqsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.